Chọọchị Christian Essene - WRSP
Chọọchị Christian Essene
EKPERE KRISTI IMO EKPERE
1964 (July 15): Olivier Manitara (nke Olivier Martin) mụrụ na Vire, Normandy, France.
1984: Manitara natara ahụmịhe mbụ ya mgbe onye Bulgarian bụ Peter Deunov, onye nwụrụ na 1944, bịakwutere ya.
1989: Manitara meghere ụlọ obibi akwụkwọ mbụ ya, bụ Éditions Telesma, na Saint-Affrique (Aveyron) France, ebe o bipụtara edemede mbụ ya.
1990: Manitara natara mkpughe site n'aka mmụọ ozi, onye nlekọta nke 'ọdịnala nke Ìhè' (Tradition de la Lumière). Mmụọ ozi ahụ gwara ya na ọ ga-ebugara ndị ọzọ ihe ọmụma ime mmụọ ya.
1991 (August 19): Manitara meghere "ụlọ akwụkwọ mbido" mbụ ya nke a kpọrọ Schoollọ Akwụkwọ nke Ndụ na Mmụọ (École de Vie et d'Esprit), mechara kpọọ ya thelọ Akwụkwọ Contemporary Essene (École Essénienne Contemporaine).
1991: Manitara malitere inwe nzukọ ọmụmụ na ebe dị iche iche na France. N'oge ahụ, a maara otu ya dị ka "Solar Culture Association" (Association Culture Solaire).
1992: Manitara na ndị na-eso ụzọ ya zụtara acres iri anọ na abụọ na Poulan na mpaghara Montlaur na Aveyron, France. N’ebe ahụ ka ha guzobere Obodo Nkuzi Essene mbụ, “Terranova.” Manitara na-ekwu okwu nkuzi kwa izu banyere mmụọ.
1997-1999: Ndi isi ochichi France nyochara Terranova. Ha na-enyo enyo na Manitara nwere njikọ na Universal White Brotherhood na Order of the Solar Temple, ha abụọ tozuru oke "ịrọ òtù" na gọọmentị France nke 1996 Akuko Guyard.
1997: Iji zere mkpakọrịta ọ bụla na ụlọ nsọ ahụ a ma ama, obodo Manitara kwụsịrị aha Nzukọ Omenala Anyanwụ.
1999: Manitara na nwunye ya nwere nwa mbụ ha.
2000 (November 21): French National Gendarmerie Intervention Group (GIGN) wakporo Terranova wee jide Manitara, nwunye ya, na mmadụ asatọ ndị ọzọ bi na obodo Terranova. Ndị GIGN ahụ jidere ha maka ịjụ ajụjụ banyere ọrụ ha.
2000 (Disemba): Manitara na nwunye ya nwere nwa ha nke abụọ.
2002 (August): Manitara natara nleta site n'aka Onyeisi Ndị Mmụọ Ozi Michael wee mee "mmekọrịta onwe onye" na Onyeisi Ndị Mmụọ Ozi iji nyefee ndị ọzọ ozi ya.
2002 (Septemba): Manitara kesara ozi nke Onyeisi Ndị Mmụọ Ozi Michael ya na ndị na-eso ụzọ ya, nke "mechiri njikọta" n'etiti ndị otu obodo na Onyeisi Ndị Mmụọ Ozi.
2003 (Nọvemba): Manitara, nwunye ya, na mmadụ isii ndị ụka Essene pụtara n’ihu ụlọ ikpe mpụ nke Millau, France. E boro Manitara na nwunye ya ebubo na ha nwere akụnụba ụlọ ọrụ ha. Ha natara mkpọrọ nke ọnwa asatọ na ọnwa iri, n'otu n'otu, ma ọ bụrụhaala na ha ekwughi okwu n'ihu ọha ma ọ bụ soro ndị na-eso ụzọ ha kwuo okwu ma ọ bụ ederede.
2003 (Septemba): Onyeisi ndị mmụọ ozi Michael rịdata na nke mbụ ya na ọkụ nke ụmụazụ Manitara. Onyeisi ndị mmụọ ozi nyefere ha abụ ọma iri na abụọ mbụ nke "Essene Bible". Nke a bụ emume "Round of the Archangels" (Ronde des Archanges) nke izizi.
2003 (Disemba): Manitara na nwunye ya nwere nwa ha nke atọ.
2004 (August): Manitara mere "mmekorita nke onwe ya" ya na ndi isi ndi isi ato: Raphael, Gabriel, na Uriel.
2004 (Septemba): Manitara jikọtara ndị otu niile nke Contemporary Essene School na ndị isi mmụọ anọ.
2006 (Septemba): Ekepụtara Essene Nation (Nation Essénienne) mgbe Onyeisi Ndị Mmụọ Ozi Michael matara ndị otu obodo dị ka "Ndị nke Ìhè" (Peuple de la Lumière) na onye na-ebu ozi ya.
2006 (Machị 21): Edere Fondation Essenia aha ka ọgbakọ okpukpe na Canada, edenyere Éditions Essenia dị ka ụlọ obibi akwụkwọ.
2007 (October 31): Fondation Essenia zụtara 103 acre Domaine Drolet na Cookshire-Eaton, Quebec, Canada iji guzobe "Maple Village" ọhụrụ (Le Village de L'érable).
2008: Manitara kwagara Canada na nwunye ya na ụmụ ya atọ. Ha kwagara na Maple Village, ya na ọtụtụ ndị na-eso ụzọ si France na Canada. Ha niile bidoro mepee obodo ndị ahụ.
2008: Gọọmentị Canada gbalịrị ịchụga Manitara na ezinụlọ ya na France n'ihi na ọ mere mpụ nke nwere ike tozuo oke mpụ na Canada tupu ọpụpụ. Mgbalị ahụ kụrụ afọ n'ala.
2009: Gọọmentị Canada nwara nke ugboro abụọ ịchụpụ Manitara na nwunye ya na France n'ihi na a ka boro ha ebubo mpụ na mba ha si. Nke a nwaa okpu.
2011 (Septemba 17): Ndị Essen zụtara Chọọchị Burchton dị nso na obodo Cookshire iji kwado mmemme na mpụga Obodo Maple ha, wee guzobekwa ili ozu Essene mbụ.
2011 (November): Fondation Essenia ka a gụgharịrị aha "Christian Essene Church" (Église Essénienne Chrétienne).
2011-2012: ndị nta akụkọ French bụ Marina Ladous na Roméo Langlois batara na obodo Essene na France, Canada, na Spain iji kpokọta ihe nkiri pụtara na akwụkwọ akpọrọ, "Gurus nke Apocalypse" (Les Gourous de L'apocalypse). Edere ihe nkiri ahụ na ọwa mmiri French nke Canal + na Disemba 2012.
2013 (June): Thelọ ụka nke Essene zụtara na Cookshire mepere mgbe emezigharị ụfọdụ.
2013: Ndị otu ụka Essene gbara akwụkwọ mkparị megide Canal + na ndị nta akụkọ abụọ ahụ, Marina Ladous na Roméo Langlois, ndị na-ahụ maka ịde akwụkwọ ahụ, Les Gourous de L'apocalypse,
2014: Onye isi obodo Cookshire-Eaton zipụrụ ozi na Church Essene na chọọchị ji ụgwọ $ 33,000 nke ụtụ isi ala na-akwụghị ụgwọ obodo maka ala ha.
2015: Mgbe mkparịta ụka udo gasịrị, obodo nke Cookshire-Eaton ghọtara na a chọghị ka Essene Church kwụọ ụtụ isi ala ebe ọ bụ na ọ ruru eru dị ka nzukọ okpukpe, ewepụ ụtụ isi na Canada.
2015 (Jenụwarị 6): Obodo nke Cookshire-Eaton nyere ọkwa nke imebi Churchka Essene maka iwuru ụlọ ndị na-anaghị asọpụrụ koodu ụlọ mpaghara ma ọ bụ ụkpụrụ gburugburu ebe obibi. Ndị Essene mezigharịrị ụfọdụ n'ime iwu ndị a.
2016 (Septemba 8): Quebec Commission for the Protection of Agricultural Land (CPTAQ) nyere ụlọ ụka Essene iwu ka ha kwatuo ma ọ bụ kwaga ụlọ iri atọ na atọ nke ụlọ ya wuru na mpaghara zoned maka ebumnuche ọrụ ugbo. Esska Essene gbara mkpebi a n’ụlọ ikpe.
2016: Essene Foundation zụtara ala na Panama iji mepụta obodo ọhụrụ Essene aha ya bụ "Ogige nke Ìhè" (Le Jardin de La Lumière). A ga-eji obodo a mee ememme na ndu olili ozu.
2017: Manitara kwupụtara na ọ gaghị anata ozi site n'aka ndị isi mmụọ ozi ka etinye ya na Oziọma ahụ; na e dere “Baịbụl Essene” ugbu a.
2018 (Jenụwarị 16): courtlọ ikpe na-ahụ maka nlekọta na Quebec kwadoro mkpebi CPTAQ ma rịọ ka eneka Essene kwatuo ma ọ bụ kwaga ụlọ iri atọ na atọ. Esska Essene gbara akwụkwọ ka e mezigharị iwu a na-ahazi onlọ Nzukọ Alaeze dị na Quebec Superior Court.
2018 (Disemba): Obodo Essene nke Cookshire kwupụtara na ọ ga-etinye ụka ha zụtara n'akụkụ obodo ha maka ire ere, ebe ọ chọrọ nrụzigharị dị oke oke iji wee mepee.
2019 (Machị 12): Ndị Essene tufuru akwụkwọ nkwulu ha megide ndị nta akụkọ Canal + abụọ n'ihu ụlọ ikpe French. E nyere Manitara iwu ịkwụ onye a na-ebo ebubo ihe ọghọm ya.
Essene hiwere ntọala na France na ngwụsị 1990 site n'aka onye amụma amara nke Eka Essene, Olivier Manitara (amụrụ Olivier Martin). Ihe onyonyo dị n'aka nri] followersmụazụ Manitara mere onwe ha ka amata dịka ndị otu nke mmụọ akpọrọ Solar Culture Association (Association Culture Solaire). Njikọ a ghọrọ okpukpe Essene na 2006.
A mụrụ Manitara na 1964 na Vire, Normandy, France. Na mbido, ọ zụlitere mmasị na nkuzi nke Peter Deunov na Mikhaël Aïvahnov, ndị mmadụ abụọ dị mkpa na themụnna Nnukwu Ọchịchị Ọchịchị, ọhụụ mmụọ ime mmụọ nke malitere na Bulgaria na mmalite 1900. Manitara na-ekwu na ọ nwere ọhụụ omimi mbụ ya dị ka onye ntorobịa. Ọ na-echeta na, n'oge njem ya na “Cathar Land” na mmalite afọ iri abụọ, mmụọ ozi bụ onye na-elekọta ọdịnala ochie nke Ìhè (Tradition de la Lumière) letara ya. Mụọ ozi ahụ gwara ya ka ọ gaa nyere ndị ọzọ ihe omuma ya (Manitara 2013: 5-8). Site na iwu mmụọ ozi ahụ, Manitara guzobere ụlọ akwụkwọ mmalite nke akpọrọ School of Life and Spirit (École de Vie et d'Esprit) n'afọ na-esote wee bido njem na mpaghara France dị iche iche iji nye nzukọ ọmụmụ ihe gbasara mmụọ.
Na mmadụ ole na ole ndị na-eso ụzọ ya mbụ, Manitara zụtara ala dị mkpụmị iri anọ na abụọ na ngbukọta Montlaur na South France. Ndị obodo dị ihe dị ka mmadụ iri guzobere otu obere obodo ha na-akpọ Terranova. Obodo a bụ ebe nzukọ maka ndị na-eso ụzọ niile si France wee kwe ka ndị bi na Terranova bie ndụ dị nso, na-akwanyere nkwanye ùgwù maka okike dịka ihe dị nsọ.
N'ọgwụgwụ 1990s, ndị ọchịchị France na-ahụ maka Terranova. Ndị ọrụ iri isii sitere na French National Gendarmerie Intervention Group (GIGN) wakporo obodo ahụ na November 2000. E jidere Manitara, nwunye ya, na mmadụ asatọ ndị ọzọ bi n'ime obodo. GIR ahụ enweghị ihe ọ bụla kpatara ọnwụ Essenes na Terranova. Agbanyeghị, ebubo ebubo Manitara na ebubo iri abụọ na abụọ, e nyekwara mmadụ asatọ ndị ọzọ oke ịhọrọ arịrịọ dịka “ndị ihe metụtara òtù”Ma ọ bụ“ na guruNdị na-eme ihe ”(Wright and Palmer 2016: 209).
Manitara cheere ruo 2003 ka ọ nụrụ ikpe ya. Ka ọ dị ugbua, ọtụtụ ihe dị mkpa metụtara obodo ahụ. N'afọ 2002, Manitara na-akọ akụkọ ahụla mbụ ya na onyeisi ndị mmụọ ozi Michael, onye gwara ya na a họpụtara ya ka ọ bụrụ onye nnọchi anya nke ụwa elu ala na ụwa Chukwu. Nke a mere ka njikọ nke njikọ dị n’etiti ụwa abụọ a, “njikọta nke Ìhè.” Ndị Essenes kwenyere na e nyewo ha ọrụ nke idobe na ichekwa njikọ a, tumadi site n’ife ha ofufe nke Nature, nke ejiri chi ya kee ya. Manitara na ụmụazụ ya mechara jikọrọ ndị isi ndị ọzọ atọ ọzọ: Raphael, Gabriel, na Uriel. Maka ndị Esseni, Manitara bụ naanị mmadụ tinye ego iji nwee ike ịgwa ndị mmụọ okwu okwu.
A mara Manitara na nwunye ya ikpe nke iji akụ nke ụlọ ọrụ eme ihe n'ụzọ na-ezighi ezi na 2003 ma nata ikpe ọnwụ nke ọnwa asatọ na ọnwa iri nke mkpokọta, ma ọ bụrụhaala na ha na ndị na-eso ụzọ ha ekwughị okwu ọnụ ma ọ bụ ederede, ma ọ bụ kwuo okwu n'ihu ọha. Ndị na-eso ụzọ Manitara nabatara ikpe a na-esiri ya ike, bụ ndị mere mkpesa na ha dabere na ya na ikike ya iji soro Chineke kwurịta okwu iji nwee njikọ na chi n'onwe ha. Agbanyeghị, obodo ahụ nwere ihe ịga nke ọma site na ịchọta ụzọ okike iji wee kpọtụrụ ya (Melanson na Guyver 2020).
N’afọ 2006, ndị isi mmụọ ozi nyere onyinye nke aha ahụ, “Essenes” n’obodo. Site na Manitara, Onye isi ndị mmụọ ozi Michael kpughere na ndị na-efe Archangels bụ akụkụ nke "Essene Nation" nke ugbu a (Nation Essénienne), ya bụ, "Ndị nke Ìhè" (Peuple de la Lumière) na-ezi ozi ha.
N'afọ sochirinụ, ndị Essenes zụtara ala dị 103-acre na Cookshire-Eaton, Quebec, Canada iji guzobe nzukọ okpukpe ọhụrụ, Maple Village. N'afọ sochirinụ, Manitara ya na nwunye ya, ụmụ ya atọ, na obere ndị na-eso ụzọ si France kwagara Canada. Emebere obodo nke atọ na 2016 na Panama, nke a kpọrọ Ogige nke Ìhè (Jardin de la Lumière). E guzobere obodo a iji nye ohere ka ndị Essenes gburugburu ụwa nwee ike na-eme olili ozu dị ka nkwenkwe Essenes si dị. Ugbu a Manitara na-akacha oge ka ukwuu n’etiti obodo atọ ahụ. Ọ na-ekwukarị okwu n'ememe Essene nke a na-eme na north Spain na Haiti.
Ọ bụ ezie na Manitara nwere ihe dị ka ụmụazụ iri atọ na France na ngwụsị 1990s, nyocha emere na 2014 na-egosi na e nwere ihe karịrị mmadụ 3,000 n'ụwa niile (Bonenfant 2014). A na - ahụkarị ihe ndị a na - asụ French dịka France, Quebec (Canada), Belgium, Switzerland, Gabon, Haiti, Réunion, Martinique, na New Caledonia yana ndị na - eso ụzọ ole na ole English English, United States, Greece, ,Tali, Spen, na Panama.
Essene cosmogony bụ akwụkwọ nke Inọk nke Akwụkwọ Mpịakọta Osimiri Nwụrụ Anwụ dere. Ozi oma nke Essene na-ekpughere otu esi ebipu ụwa ihe nke ụwa site na puku kwuru puku afọ gara aga mgbe ndị mmụọ na-arịa ọrịa na ndị mmụọ na-eme isi ike, na-achọ iji ike ha mee ihe n'ime ụwa na-abụghị nke Chineke, wakporo obi ụmụ mmadụ. Ihe nke a rụpụtara bụ ikewapụ uche mmadụ na ụwa elu ala nke mmụọ, ihe ndị Essenes na-ezo aka dị ka “mmebi nke njikọta nke Ìhè” nke jikọtara ụwa abụọ site na mmalite nke oge. Ndị Essene kwenyere na Inọk na Jizọs nwere ihe ịga nke ọma n'ịlaghachi njikọ ha. Agbanyeghị, njikọta ahụ mebiri ọzọ mgbe akpọgidere Jizọs n'obe, rue mgbe Olivier Manitara na ndị Essenes ọgbara ọhụrụ weghachiri ya. Ọrụ nke Essenes na ụwa nke oge a bụ ihe mere iji kpuchido ma bufee njikọ a nke Ìhè site n'ife ofufe nke na-aga n'ihu.
Nature dị n'etiti usoro nkwenye Essenes. Ndị Essene kwenyere na ike ndị mmụọ nsọ na-abịaru nso n'ihe "dị ndụ" n'ụwa, dị ka Nature. Karisia, ndi Essenes na-efe ndi isi ala anakpo anọ, nke ekwenyere na nkea bu onye an’enweta nihi na okike: Michael n’oku oku, Gabriel na mmiri, Raphael n’igwe, na Uriel n’ime ala. N'aka nke ọzọ, a na-ewere ụwa nke teknụzụ dị ka “ụwa nwụrụ anwụ” nke ike ndị Chineke na-agaghị agaru nso. Yabụ, ekwenyere na iji teknụzụ kpuchie mkpụrụ obi na ahụ mmụọ. Ọ bụ ezie na ndị Essenes na-eji teknụzụ, a na-agba ha ume iji ya mee ihe n'ụzọ amamihe na ruo n'ókè. Dika nkwenkwe Essen si kwuo, oburu na anataghi onyinye ofufe nke Chineke (ya bu ihe), nmekorita ya na uwa nke elu igwe di ndu. Mgbapu a nwere ike iduba ndi mmadu ka iwere ihe ojoo ka ha lee ihe ochicho ma obu “transhumanism,” onodu nke Chineke kari ghara inwe ike iru uche mmadu (Manitara 2015: 31).
Ndi Essenes na-agba ume ndụ na obodo ekpuchita na nke ime mmụọ nke dị n'ime ọhịa. Nke a na-enyere ha aka ịghara ịdọpụ uche nke ụwa nke oge a na ịnọrọ ndị mmụọ nsọ nso. Nke a mere ka ha lekọta ọ bụghị naanị maka njikọta nke Ìhè ahụ maka ọdịmma mmadụ niile, kamakwa maka ọdịmma nke mkpụrụ obi ha. N’ezie, Manitara na-ekwu na ndị mmadụ nwere ike ịhapụ onwe ha pụọ ​​n’ike ọjọọ nke ndị mmụọ ozi dara ada, nke ndị Essenes na-ezo aka dị ka “counter-omume” (contre-vertus), site na mmepe nke “nghọta” na ọmụmụ nke ederede amamihe. A na-enweta nghota nke mmadu ịmara na nsọpụrụ nke Nature. N’echiche ha, omume a ga - eduga onye ahụ nso na mmetụta dị mma nke ndị mmụọ ozi ọma na ndị kwesịrị ntụkwasị obi; ndị ahụ ndị Essene kwenyere ịhapụ ụwa nke Chukwu ma bụrụ ndị ha na "ezi omume ọma" metụtara. [Foto dị n'aka nri]
Echiche ụgha na ozizi Essenian dị n'akwụkwọ ederede, "Essene Bible". Nke a mejupụtara Oziọma ndị mmụọ ozi anọ ahụ, dịka Manitara si kọọ n'agbata 2003 na 2017. Ọ bụ ezie na mkparịta ụka Manitara na ndị isi mmụọ ka na-aga n'ihu ma nwee ike iwebata ihe ọhụrụ n'ime okpukpe Essene, Manitara kọrọ na 2017 na ọdịnihu ndị a ekwesighi itinye ihe nkwukọrịta na ozioma nke Archangels ebe obu na akwukwo a zuru ezu. 'Essene Bible' nwere akwụkwọ iri anọ na anọ, ha na-agụ peeji 4,744, akwụkwọ a na-ekwu na ọ bụ otu n'ime ndị isi mmụọ ozi na-akọwa isiokwu dị n'etiti echiche Essene. A na-ahụta ya dị ka “Agba Ọhụụ” nke Akwụkwọ Nsọ Ndị Kraịst.
Akwụkwọ Nsọ nke Christian nwekwara ebe dị mkpa n'okpukpe Essene. Ndi Essenes siri ọnwụ na a mụrụ Jizọs n’ime obodo Essene oge ochie, nke na-enweghị ike ịghọta njikọ miri emi ya na Chineke. Nke a mere ka akpọgide Jizọs n'obe, ihe omume mere ka mmadụ ghara ịdị n’etiti mmadụ n’ebughị ụzọ dopụrụ Chineke anya. Ndị Essene kwenyere na Josef bụ ezi nna Jizọs. Ha kwenyekwara na ọ bụ njikọta nke Mary na Onye isi ndị mmụọ ozi Gabriel bụ onye mere ka ọbịbịa nke ọbịbịa Jizọs (Manitara 2005, 2006).
Ememe Essene kachasi mkpa bu Round of the Archangels (Ronde des Ndị mmụọ ozi), na-eme ya ugboro anọ n'afọ n'otu solstice na equinox. Anọ ndị isi anọ na isi nke echiche Essenes bụ nke ọ bụla nwere otu ihe metụtara okike. Onye isi ndi ozi Michael bu oku n’agha, ma eme ememme n’abia; Onye isi mmụọ ozi Gebriel [Ihe osise dị n'aka nri] bụ onye akpọrọ na mmiri ma eme ya n'ọkọchị; onyeisi mmụọ ozi Raphael, onye incarnates na ikuku, na-eme ememe n'oge opupu ihe ubi; na Onye isi ndi mo-ozi Uriel, bu onye obi nke uwa cweliri elu na ọkọchị (Blandre 2014). Site na ofufe nke Nature na site na isoro ndị isi arụọkọlọkụ anọ na gburugburu ndị isi ndị mmụọ ozi, ndị Essenes kwenyere na ha na-ejikọ aka na ụwa nke Chukwu.
Igwe nke ndi isi ndi mmụọ ozi di ogologo oge ato. Ọ bụ ezie na ọnụnọ nke Manitara abụghị maka ememme ahụ, ọ na-agbakarị njem gaa ebe a na-eme nnukwu ememe ahụ. Ọ na-agakarị ememme na Maple Village (Canada), Spain (ebe ndị otu French si Terranova nwere ike ịga njem ngwa ngwa), na Haiti. N'ihi nke a, ememme a na-eme otu mgbe ma ọ bụchaghị na a ga-eme ya kpọmkwem n'ụbọchị solstice ma ọ bụ equinox.
N'ime ubochi ato ahu, a haziri ihe di iche iche dika oge ntughari uche, ukwe, egwuri egwu, ebe a na-eme ezinulo. Emere nnukwu ememe, bụ ebe a na-edobe Onye-isi Elu nke oge a ofufe, n'ụbọchị ikpe-azụ. Manitara anaghị arụ ọrụ ofufe dị egwu n'ime ụbọchị atọ ahụ ma ọ nọ ya naanị iji nyefee ozi site n'aka Onyeisi Ndị Mmụọ Ozi a ma ama na-ekwu okwu na ọnọdụ ime mmụọ. Ememe ofufe ikpe-azụ bụ mmadụ anọ n’ime ndị otu tozuru oke n’ọgbakọ, ndị zụrụ azụ na nzube a. Ọ bụkwa n’oge ahụ ka a na-amalite ndị otu ọhụrụ n’ime mba Essene. A na-akpọ eme nnabata ahụ 'ịkpọ ụdọ' (prendre la corde), n'ihi na a kpọrọ onye ahụ bidoro ịbanye n'etiti nsọ, nke ụdọ nke ndị isi mmụọ ozi. Initimalite, wezuga ihe ọ pụtara iji bụrụ akụkụ nke mba Essene, na-egosi itinye onwe ya n'ọrụ n'ịkwado mmekorita nke onwe ya na Chukwu.
Ememe nnabata a bụ akụkụ nke usoro nnabata nke ndị Essen nwere ike ịchọrọ ma ha chọọ. Dika okpukpe Essene si di, uzo uzo asaa di elu. Stepzọ nke ọ bụla na-anọchi anya ogo nke ịdị elu nke ụwa nke Chineke, yana nzọụkwụ kachasị ala na-anọchi anya ndị kacha nọrọ n'ụwa ụwa. Ntinye aka na ụbara ndị isi mmụọ ozi bụ usoro mbu. Ndị Essenes niile buterela ụzọ mbụ a bụ ndị nchụàjà ma ọ bụ ndị nchụàjà (nke ikpeazụ a na-akpọ 'vestals'). Ndị ahụ bụ ndị kacha elu nwere oke ọrụ dị ọcha. Ha kachasị, ha ga-akwụrịrị ndị isi mmụọ ozi ofufe ugboro abụọ n'ụbọchị site na ịga na ụlọ nsọ ha na obodo Essene ma na-eme obere ememe. Iji maa atụ, ụkọchukwu nke usoro nke anọ ga-enwekarị ndị nnọchi anya ndị mmụọ ozi ọ ga-elekọta.
Mmadu obula puru ask r to ime ihe mmalite iji bulie ogo nke elu nke ime mmụọ. Nke a nwere ike bụrụ ihe na-achọsi ike ma were ọtụtụ ọnwa ma ọ bụ ọbụna ọtụtụ afọ ka emechaa. A na-emezikarị usoro ndị a n'ememe “okirikiri”, nke a na-arụ n'ime obodo Essene n'okpuru nduzi nke ndị ọgbọ na nlekọta nke vest ma ọ bụ ndị ụkọchukwu. Ọtụtụ ndị Essenes bi n'ime obodo Essene ewerela usoro nke abụọ ma ọ bụ na-achọ imecha ya. Nke a na-achọ imezu "ọzụzụ nke ahụ anọ" (form des quater corps). '' Ahụ 'ọ bụla na-anọchi anya ọdịdị nke ihe mmadụ na-akwadoghị ga-enweta. A na-eme ememe mmalite a n'otu n'otu naanị n'oge ndị a na-adịghị ahụkebe ebe ọ bụ na Essenes kwenyere na ike nke ike ụwa na-aka ahụmịhe nke ọma. Iji maa atụ, ọzụzụ maka “ahụ ọkụ” chọrọ ndị bidoro idowe nkụ na - aga n’ihu ihe dịka ụbọchị asaa. Nkuzi a choro ime ka ndi mbido mara banyere ike nke ndi Essen nwere ike itinye iji chekwa mmekorita ya na Chukwu mgbe ha jikotara. A na-eme nyocha ahụ ndị a n'okpuru nlekọta nke vestals, ndị na-ekpebi ma otu a ga - ejikọ ya na Chukwu ma ọ bụ na ọ gaghị. N'ọnọdụ nke abụọ, a ga-agbatị oge ịmalite ma ọ bụ ga-emecha ya niile. Ozugbo ha mechara ozuzu anọ ahụ, ndị Essenes na-achọ ịkwaga n'akụkụ nke abụọ ga-asachapụ uche ise ha. Ememe mmemme ido ọcha ise ga-anọ ogologo ụbọchị. Ha choro ileta otu ulo uka nke di n’ime ogbe nke obodo site na ubochi ututu na ututu wee bido ilegide anya n’uche di ocha n’iru na nnabata. A na-akpọ “usoro ihe mmebi ikpeazụ” iji mezue nnabata nke abụọ nke abụọ “ọzụzụ nke ọnwa isii” (form des isii lunes). N'oge ọzụzụ a, mmadụ ga-abanye n'otu ụlọ nsọ ugboro atọ n'ụbọchị iji mee ememe dị mkpirikpi maka oge ngagharị ọnwa isii (ya bụ, obere obere ọnwa isii), na njedebe nke onye ahụ ga-ehi ụra na temple site n’ọwụwa anyanwụ rue ọdịda anyanwụ ruo otu izu. Onye ụkọchukwu nke usoro nke anọ ga-enyocha ahụmịhe nke mmụọ nsọ nke onye ahụ n'ụlọ nsọ ma chọpụta ma ememe ahụ ọ̀ bụ ihe ịga nke ọma. A ga-atụle mmadụ na nzọụkwụ nke abụọ naanị mgbe emechara ememme ndị a niile.
Ọ bụ ezie na usoro asaa dị na usoro ahụ, ọ nweghị onye nọ n'oge a nwere ọganihu gabigara ọkwa nke anọ, gụnyere Manitara. Na akụkọ akụkọ Essene, a na-ekwu na Inọk na Jizọs bụ naanị ndị ruru nzọụkwụ nke asaa. Onu ogugu ndi ozo dika ndi amuma Muhammad na Mani erutela nke ise, Peter Deunov na Michaël Aïvanhov nke anọ, na Rudolf Steiner nke ato (Manitara 2016: 18-19). Na mpaghara Essene nke oge a, a na-ele Manitara anya dị ka onye bụ onye ruru ọkwa nke anọ site na ọkwa dị omimi nke mmụọ. Ndị otu na-agbasi mbọ ike na usoro nke anọ a site n'okporo ụzọ guzobere maka njikọta ofufe, nke a ka na-emepe emepe. N’ezie, ebe nzọụkwụ nke ise, nke isii, na nke asaa kwekọrọ n’otu nkwụpụ nke ndụ ụwa na ịdị elu dị elu nke ụwa nke mmadụ n’enwetaghị n’oge a, ndị Essenes enweghị ike ịma ụdị nnabata ọ ga-achọ. (Manitara 2010: 26-29).
Ufọkabasi Christian Essene bụ ndị na-akwadoghị usoro maka ọrụ nchịkwa ya. Isi ụlọ ọrụ ya dị na Maple Village, nnukwu obodo Essene mba ụwa, yana gọọmentị gọọmentị nke Manitara. Alaka nke Essene Church dị na France, Switzerland, Gabon, Haiti, Italy, Spain, na Panama. Ọ bụ ndị a họpụtara so na kọmitii mpaghara na-eme mkpebi ndị emetụtaghị ndụ nke mmụọ. A na-enwe nzukọ na Maple Village ma ndị otu kọmitii kọmitii na mpaghara ndị ọzọ ga-ekere òkè na mkparịta ụka ahụ na ekwentị. The Maple Village na Terranova nwere kọmiti nke ndị nnọchi anya iji hụ na arụmọrụ nke ọma kwa ụbọchị n'obodo a. A haziri nzukọ izugbe iji mee ka ndị bi n’obodo nta ọ bụla mata ihe ọhụrụ gbasara obodo na ịza ajụjụ ma were arịrịọ ma ọ bụ atụmatụ. Ndị otu bi n'ime ime obodo ndị chọrọ ịrụ ọrụ ụfọdụ akọwapụtara chọrọ ohere ma ọ bụ ala ga-ewetara kọmitii ahụ ọrụ ha ma kwadokwa ha.
Somefọdụ n'ime ụmụ okenye mbụ nke Manitara, ọtụtụ mgbe ụfọdụ ndị kachasị elu n'ụzọ ime mmụọ, ga-agakwuru Manitara mgbe ụfọdụ n'okwu metụtara obodo ahụ ma kọọrọ kọmitii kọmitii. Ọrụ Manitara na iwere mkpebi ndị bara uru maka obodo dị obere ma ahapụrụ ya ndị na-eso ụzọ maka mkpebi ndị metụtara ụwa ụwa. N'ikwu okwu n'ozuzu, ndị otu na-ahụ ya dị ka ụdị "ịchụ" iji weghara ọrụ nke ime mkpebi ụwa ụwa. A na-ahụta ndị na-arụ ụdị ọrụ ahụ bụ ijere obodo niile ozi, na-ahapụ ndị ọzọ ka ha lekwasị anya na ndụ ime mmụọ ha.
Iji mee ka ọha na eze mata izizi Essene, a na-ehibe “sslọ Essene” na “Holọ nke Chukwu” (Maisons de Dieu) n'obodo dị iche iche na mba dị iche iche. Ogige ndị a na-enye klas dị iche iche na ọrụ dị ka oge ntụgharị uche, oge ịgba egwu, na egwu Essene. Essenes na-enwe nzukọ na Round of Onye isi mmụọ ozi ndị a zụrụ azụ dị ka “ndị na-agụ akwụkwọ-ụkọchukwu” (prêtres-lecteurs); ya bụ, ndị kwerela onwe ha nkwa ikwusa ozizi Essene. Ebe ọ bụ na ụlọ ọrụ ndị a na-arụ ọrụ dị ka ebe a na-ewe ndị mmadụ n'ọrụ, ha anaghị akụzi nkuchi mmụọ, kama ha na-ewebata isi ọrụ banyere ibi ndụ Essene.
Ọtụtụ ndị mmadụ na-eleta ebe ndị a agaghị eme Essenes. Agbanyeghị, ndị nwere mmasị ịchụso nkuzi Essene ga-enwe ohere iji “ezi nloghachi nke obi” (le Bon retournement du cœur). Na ememe a dị mkpirikpi, dabere na ọrụ okwukwe na ọdịnala Ndị Kraịst, onye ụkọchukwu Essene ma ọ bụ vestal ga-esonyere onye ahụ n'ịnabata ndị isi mmụọ ozi ma rịọ maka ngọzi ha. A na-atụle nke a dị ka nzọụkwụ mbụ iji bụrụ onye Essene, nzọụkwụ kachasị mma bụ nnabata na Round of the Archangels.
Edinyere Essene aka tumadi site na inye onyinye, ire ya Ọnọdụ Essenia, Manitara nwere ntanetị n'ịntanetị na weebụsaịtị Essene Church, yana ụgwọ maka ikere òkè n'ememe na nnabata. A na-eji ego ndị a enyere aka maka mmepe obodo na ebe etiti Essene, wee kpuchie ụgwọ ndị otu Essene na-arụrụ ọrụ, dịka ndị na-arụ ọrụ n'ụlọ obibi akwụkwọ ma ọ bụ dịka ndị ụkọchukwu oge niile.
Alllọ nile dị n’ime obodo Essene bụ ihe onwunwe nke Chọọchị Essene. Ya mere, mgbe ndị otu na-ala, ha anaghị enweta ego ha na ụka Essene, kama ha nwere nhọrọ nke re ụlọ ha Essene ọzọ na-abịa ibi n'obodo. Inbi n'ime obodo Essene choro itinye aka na ego iji kpuchie ego maka ndozi na mmepe obodo.
Mkpebi nile metụtara ihe ime mmụọ ka a hapụrụ n’aka Manitara na “Usoro nke ndị ụkọchukwu.” Communityfọdụ n'ime ememme a, dịka nke a kwesiri maka ụmụ nwanyị, obodo ka na-emepe. Ndị otu na-akọ na Manitara mepụtara usoro ofufe mgbe ndị obodo ka pere mpe, mana ka ọ na-agbasawanye ya, o nyefere ndị ụkọchukwu nwere ahụma ọrụ ka ha duzie ma tụgharịa ya, ọ bụ ezie na ọ na-adụ ha ọdụ site n'oge ruo n'oge. Ndị isi mmụọ ozi nwere ike ịrịọ ka emee ihe ụfọdụ akọwapụtara, mgbe ahụ Manitara ga-ezigara ndị obodo obi ha ihe ha chọrọ. Iji kọwaa gbasara ememe, ma ọ bụ kuziere ha akwa na ndị ụkọchukwu, ndị Essen ga-ezukọ na massalas. Massalas ahụ metụtara ozizi Essene ndị ka sie ike ma sie ike na ụzọ nke mmụọ. Massalas na-enyekwa ọzụzụ maka ndị chọrọ ịbanye na Round of the Archangels na ememe ndị ọzọ malitere. Masfọdụ massalas dị n'ịntanetị.
Ndị nnọchi anya mmadụ ole na ole sitere na mpaghara Essene zuru ụwa ọnụ (ọ na-abụkarịkwa ndị ụkọchukwu kacha okenye) bụ akụkụ nke "oflọ nke Hierogrammats," nke kegidere n'ụlọ obibi akwụkwọ Essenes, Ọnọdụ Essénia. Ndị otu nke Hierogrammats na-arụkọ ọrụ na Manitara iji hazie ma bipụta akwụkwọ ya ederede edemede site na nzute ya na ndi otu Archangels. Ha na-ahụ maka idegara akwụkwọ Manitara n'ihu; Ihe onyonyo dị n'aka nri] ya mere ha ga-enwerịrị nghọta zuru oke gbasara okpukpe Essene. Ndị otu nke Hierogrammat bụ ndị Manitara na ndị otu nọ ugbu a ka ahọrọ. Ọ bụrụ na otu onye chọrọ ịhapụ ọkwa ya, ha kwesịrị ịgba mbọ hụ na ha achọpụtala ma zụọ onye otu ọzọ ka ọ nọchie ha.
Ndị Essenes nwere ọtụtụ nsogbu chere steeti ahụ, ma na France na ngwụsị 1990s na mmalite 2000s, na mgbe e mesịrị na Canada mgbe ha guzobere Maple Village. Na France, mgbe ọdachi ahụ mechara nke 1994 nke Order nke Solar Temple, ọrụ nke "lectct, " gụnyere ihe omume emere na Terranova, steeti na-enyocha ya nke ọma (Palmer 2011). Nke a kwụsịrị na mwakpo ndị uwe ojii wakporo Terranova na Nọvemba 2000. O doghị anya ihe kpalitere mwakpo ahụ. Palmer (2011: 209) dere na “ndị mmadụ wakporo akụkụ ahụ maka na ndị njem ebubatala ụzọ aju mpaghara e nwere njehie na nkwupụta maka Assédic (ụlọ ọrụ France na-anakọta ma na-akwụ ụgwọ mkpuchi mkpuchi na-enweghị ọrụ). "Ndị otu Essene si France, bi ugbu a na Quebec, na-akọ na e nwere asịrị ndị agbata obi nke Terranova na ndị obodo na-echepụta a Bọmbụ igbu onwe, dị ka larlọ Mbara Igwe. Ihe ndị a mere n'oge a na-ekwu maka agha “nke ịrọ òtù nke France,” ebe gọọmentị haziri ọtụtụ mwakpo okpukpe ndị obere ka akpọrọ “ịrọ òtùs(Palmer 2011)
Mgbe mwakpo ahụ gasịrị, a gbanwere Manitara site na ọnụ ọgụgụ iri abụọ na abụọ ma chọpụta na ikpe mara ya (ya na nwunye ya) maka iji akụ na ụba ụlọ ọrụ na 2003. Ọtụtụ n'ime ebubo ndị kpatara ebubo ahụ zoro aka na njikwa ego nke otu ahụ. Mgbasa ozi mgbasa ozi nke France na-agbasa ebubo ahụ ma wepụta akụkọ banyere njigide uche na aghụghọ ego nke ndị a na-akpọ "guru" na nwunye ya. Midi Libre, dịka ọmụmaatụ, gụọ na “[a] n'ihe a na-eme nyocha… ọ dị ka ọ bụ Olivier Manitara na-elekọta mkpụrụobi tupu [nwunye ya] ejiri ego nke ndị otu” (Laudinas 2000). Isi okwu ndị ọzọ gụrụ "Otu òtù nke nwere ego na-adịghị ahụ anya" (Hurtevent, November 23, 2000) na "Guru nke ịrọ ahụ karịrị ego niile na-efe ofufe" (Hurtevent, November 24, 2000). Ndị otu Essene kwupụtara nke a mepụtara ọnọdụ nke egwu gburugburu Churchka Essene na ọrụ ha, nke mere Manitara ịrịọ onye na-eso ụzọ ya ka ha chọta ala na mba ọzọ ebe ha ga-enwere onwe ha iji gbalịsie ike na mmụọ ime mmụọ ha.
Achọtara ala na 2007 na Canada. Agbanyeghị, ndị obodo nọ ebe ahụ enwetara nsogbu ndị ọzọ na steeti ahụ ọzọ. N'oge na-adịghị anya mgbe Manitara kwagara, gọọmentị Canada nwara ịchụghachi ya na France. N’afọ 2008, gọọmentị etiti rụrụ ụka na a ga-achụpụ Manitara maka na o mere mpụ nwere ike iru eru dị ka “mpụ iwu siri ike” na Canada. Mgbalị a kụrụ afọ nke ọma ebe ọ bụ na ụlọ ikpe French enweghị ike ikpebi, mgbe o mere ebubo ahụ, ma ọ bụrụ na Manitara mere aghụghọ ma ọ bụ ọ bụrụ na ọ kpatara ajọ mbunobi. N’afọ 2009, gọọmentị Canada gbadoro ụkwụ nke abụọ iji chụpụ Manitara n’eziokwu na o mere mpụ tupu ọ bịarute Canada. Mgbalị a kụrụ afọ ọzọ ọzọ n'ihi na 'iji akụ na ụba ụlọ ọrụ' emeghị ọnụ na iwu Canada dabara na ya, yabụ na ikpe amaghị Manitara ma ọ bụrụ na a gbara ya na Canada (Teisceira-Lessard 2014).
Chọọchị Essene chere okwu banyere ụtụ isi na 2014, yana obodo Cookshire-Eaton. Obodo ahụ mara ụka Chọọchị Essenes maka ịhapụ ụtụ isi. Ebe ọ bụ na a na-eji ala Maple Village eme ihe maka ebumnuche okpukpe, ndị isi ya rụrụ ụka na o kwesịrị ịhapụ ya site na ụtụ isi ala karịa iwu obodo. Onye isi obodo nke Cookshire-Eaton kwuru na eziokwu ahụ kwuru na ala ala acre acre dị iri isii na ụtụ isi, kama ịbụ naanị otu n'ime ụlọ abụọ akọwapụtara na ala ahụ. Mgbe esemokwu otu afọ gasịrị, ndị Essenes jisiri ike ịkọwa na a na-eji mkpokọta ala a maka ebumnuche okpukpe. Ha kọwara na ndị bi n'ime obodo bụcha ndị ụkọchukwu ma ọ bụ akwa, na ha lere ala ahụ anya dị ka ebe obibi ndị mọnk ha. Nke a kwenyere ndị ọchịchị obodo ahụ, ikpe ahụ emeghịkwa ka ọ bụrụ ụlọ ikpe (Melanson na Guyver 103).
Nnukwu esemokwu nke atọ mere na February 2015. Ndị Essenes nwetara amata na-ekwupụta na e wuru ụlọ iri atọ na atọ n'ụzọ iwu na-akwadoghị na mpaghara nwere ngalaba maka ọrụ ugbo. Kọmịị maka Nchedo Ala Ọrụ Ugbo (CPTAQ), nke ndị obodo na-akwado, nyere iwu ka ha kwatu ma ọ bụ kwatuo nrụnye na ụlọ niile enyere maka ofufe.
Site na 2011, Eka Essene nọ na-eleta ndị nleta site n'aka ndị ọrụ obodo, na-echegbu onwe ha banyere ọnọdụ nke ọtụtụ ụlọ a rụrụ na-enweghị akwụkwọ ikike. Ndị Essen nwere ike inweta ikike ụfọdụ ụlọ, mana ọ bụghị maka ndị ọzọ. Mgbe ha natara ikike ụlọ ikpe CPTAQ, ndị Essenes kpebiri ịgbagha mkpebi a. Ha gbara akwụkwọ ka emegharịa iwu mkpuchi mpaghara iji tinye ofufe a na-efe ala ahụ. Esemokwu ha gbara bụ na okpukperechi ha chọrọ ka ha baa Nature nso, yabụ ekwesiri ka ahapụ ha ka ha mee ọrụ na mpaghara ime obodo. Ndị Essenes kwukwara na ala a zụtara na Cookshire-Eaton dị nsọ n'ihi na ọ kwekọrọ na nkọwapụta ndị isi ndị mmụọ ozi nyefere gbasara ebe obodo Essene nke abụọ ga-ehiwe (Melanson 2020). N ’ederede a, otu a ka na-agbagha n’iwu ikpe nke CPTAQ.
Ihe ịma aka ọzọ dị na Canada nke na-etinyebeghị aka na steeti ahụ bụ mbọ nke Essenes nwere ịnwe olili nke ha ma na-eduzi ọrụ olili na nkwenye ha. N’afọ 2011, ndị Essenes zụtara otu ụlọ ụka Katọlik ochie nke a hapụrụ ka ọ nọrọ na Maple Village, iji wee mee ụfọdụ emume na mpụga obodo wee guzobe ebe ili ozu Essene. Agbanyeghị, idozi ụlọ ụka ochie chọrọ ịrụzigharị ihe dị oke ọnụ, yabụ obodo mechara ree ya. Iwu ndobe iwu nke na-achịkwa Maple Village anaghị enye ha ohere ịnwe olili n'ime obodo ha. Ya mere, ndị obodo ekpebiela ime obodo Essene nke atọ na Panama, ebe ndị otu ga-enwe ike ịme emume Essenian dịka ha hụrụ na ọ dabara adaba; ọ kachasị, ka e lie ozu onye ha nwụrụ anwụ n’ụdị ya mgbe emechara ụbọchị atọ. E guzobere Ogige nke Panama's of the Light, nke ewepụtara na 2016 ka o wee kwe ka ndị Esseni gburugburu ụwa sonye na olili ozu Essene.
Na mmechi, Essene Church abatala mgbasawanye na-adịghị mma site na mgbasa ozi; mgbe ndị nta akụkọ France abụọ batara n’obodo ha na France, Canada na Spen maka akwụkwọ a na-akpọ “The Gurus of the Apọkalips.” N’edemede a, ndị odeakụkọ ahụ kwuru na ha hụrụ na Essene Church na atụmatụ ndị yiri ya na Order of the Solar Temple. E gosipụtara Essenes na Manitara dị ka ndị na-asọpụrụ Hitler ma na-eche ọgwụgwụ ụwa.
N’afọ 2010, MIVILUDES (2010: 85) ewepụtala akwụkwọ ebe ha kọwara Essenes dị ka otu “na-ebu amụma njedebe nke ụwa na Disemba 21, ụbọchị mbido oyi.” Ọ bụ ezie na ụbọchị ahụ dị mkpa nye Essenes dị ka o kwupụtara oge nke ngwangwa mmepe nke teknụzụ maka mmadụ, ekwughị na ọ bụ njedebe nke ụwa. N’oge na-adịghị anya e kesachara akwụkwọ ahụ na Disemba afọ 2012, Eka Essne gbara akwụkwọ mkpesa megide ndị nta akụkọ abụọ na mmadụ atọ ndị ọzọ sonyere na nrụpụta akwụkwọ a. Ha tụfuru ikpe ahụ na Mach 2012 wee nye Manitara iwu ka ọ kwụọ euro 2012 na mbibi ọ bụla n'ime mmadụ ise a na-ebo ebubo (Le Figaro 2019).
Foto # 1: Olivier Manitara.
Foto # 2: Maple Village dị na Cookshire-Eaton, Quebec.
Image # 3: Essene nọchiri anya mmụọ ozi.
Foto # 4: Ihe ncheta nke nkwanye ugwu onye isi ndi mmụọ ozi Gabriel na Maple Village.
Foto #5: Cover nke Akwụkwọ Nzuzo nke Essene Magi nke Olivier Manitara dere.
Blandre, Bernard. 2014. "Olivier 'Manitara' et les néo-esséniens." Mouvements Religieux 411: 3-14.
Bonenfant, Frédérique. 2014. “Église essénienne chrétienne. Center de ressources et d'observation de na nnabata okpukpe. ” Laval University. Nweta site na https://croir.ulaval.ca/fiches/e/ eglise-essenienne-chretienne/ na 15 May 2019.
Hurtevent, Xavier. 2000. “Une secte aux ego gbara ọchịchịrị.” Dispatch nke Midi, November 23.
Ladous, Marina na Roméo Langlois. 2012. "Les gourous de l'apocalypse." Kanal +, December 19.
Laudinas, Gérard. 2000. “Coup de semonce judiciaire pour les éditions Telesma.” Le Midi Libre, November 24.
Melanson, Marie-Ève. (Na-abịa abịa). "Eka Christian Essene: Nnwere Onwe Okpukpe na 'Ala Maple'." The Mystical Geography of Quebec: Catholic Schisms na okpukpe ọhụrụ, nke Susan J. Palmer, Paul L. Gareau na Martin Geoffroy depụtara. New York: Palgrave Macmillan.
Melanson, Marie-Ève ​​na Jennifer Guyver (na-abịa abịa). "Strategies Na Ọnọdụ: Ndị Essenes na France na Canada." Na Otu Okpukpe pere mpe si emeghachi omume na Iwu: Ọmụmụ okwu na akwụkwọ ọgụgụ, nke James T. Richardson na Eileen Barker degharịrị. New York: Nleta.
Manitara, Olivier. 2017. La Bible Essénienne. Cookshire-Eaton: É ọnọdụ Essénia.
Manitara, Olivier. 2016. Mani, fut bien aimé de dieu: texte inédit, retrouvé et restauré. Cookshire-Eaton: É ọnọdụ Essénia.
Manitara, Olivier. 2015. Leta edemede: Une terre wunye Dieu. Cookshire-Eaton: É ọnọdụ Essénia.
Manitara, Olivier. 2013. Évangile Essénien de l'Archange Michaël. Tome 1 - Trouve ton propre chemin. Cookshire-Eaton: É ọnọdụ Essénia.
Manitara, Olivier. 2010. Mkparịta ụka avec la Mère-Terre: Ọ dịghị onye ọzọ ga-anata ozi ọma. Cookshire-Eaton: É ọnọdụ Essénia.
Manitara, Olivier. 2006. Marie, la Vierge Essénienne. Rosemère: Ọnọdụ Cœur de Phénix / Ọnọdụ Ultima.
Manitara, Olivier. 2005. L'enseignement de Jésus l'Essénien: ihe omume iri na abụọ d'éveil et de libération. Rosemère: Ọnọdụ Ultima.
Palmer, Susan J. 2011. New Heretics nke France: Okpukpe dị iche iche, la République, na “Agha Maka Warrọ Dị." New York: Oxford University Press.
Teisceira-Lessard, Philippe. 2014). “Ordre des Esséniens: Ottawa a tenté d'expulser le gourou. ” LaPresse, Ọrụ, October 4. Nweta site na https://www.lapresse.ca/actualites/justice-et-affaires-criminelles/affaires-criminelles/201410/04/01-4806275-ordre-des-esseniens-ottawa-a-tente-dexpulser-le-gourou.php na 26 December 2019.
Wright, Stuart A. na Susan J. Palmer. eds. 2016. Zion Storming: Ọchịchị Gọọmenti na Okpukpe. New York: Oxford University Press.
Le Figaro. 2019. “Ọwa mmiri +: un gourou débouté de sa plainte en diffamation.” Le Figaro, March 12. Nweta site na https://www.lefigaro.fr/flash-actu/canal-un-gourou-deboute-de-sa-plainte-en-diffamation-20190312 na 26 December 2019.